एउटा अधबैँसे पुरूषको भ्यालेन्टाइन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एउटा अधबैँसे पुरूषको भ्यालेन्टाइन
२०७१ फाल्गुन ९, शनिबार ०४:०० गते
म नेपाल सरकारको कर्मचारी । कर्मचारीको हैसियतमा मैले सरकारले जुन जिल्ला खटायो, त्यहाँ गएर काम गर्नु नै पर्दथ्यो । यही सिलसिलामा आफ्नो घर तराई भएता पनि म जागिरे भएकाले नै काठमाडौँ खाल्डोमा पस्न पुगेँ । आफूलाई पनि राजधानीमा जागिर गर्ने मन र छोराछोरीको उच्च शिक्षा पनि आफ्नै निगरानीमा गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले म काठमाडौँ आएको थिएँ । श्रीमती तराईको घर कुर्नुपर्ने बाध्यतामा, म छोराछोरी लिएर काठमाडौँमा । अफिसको काम त उही हो जहाँ भए पनि, तर अफिसबाहिरको माहोलले भने मलाई बेलाबेलामा झस्काइरहेको थियो ।
काठमाडौँमा डेरा लिएको भोलिपल्ट म कोठामा चाहिएको केही आवश्यक सामान किन्न भनेर नयाँ बानेश्वर चोकमा निस्किएको थिएँ । नयाँ मान्छे, कुन सामान कहाँ पाउँछ भनेर साथीको सहयोग लिन साथीलाई फोन गरेँ । उनलाई पर्खन म केहीबेर चोकमा मोटरसाइकल रोकेर बसेको त मलाई त्यहाँ बसिनसक्नु पारे मैयाँहरुले । एउटी मोटी मंगोलियन अनुहारकी, अर्की अग्ली तराईबासीजस्ती, अर्की काली तर बाहुन–क्षेत्रीजस्ती र अर्कीको त बोलाइबाट नै थाहा भयो, उनी स्थानीय नेवार परिवारकी हुन् कि जस्तो । मैयाँहरु एक्लैएक्लै आएर मलाई सोधिरहेका थिए–
‘कहाँ जाने ? कति घन्टाका लागि र कति दिने ?’
यस्ता प्रश्न उनीहरुका लागि अन्जान व्यक्ति मलाई सोध्नुबाट तीन सन्तानको बाबु भैसकेको मैले थाहा पाइहालेँ, उनीहरुले मसित के खोजेका हुन् भनेर । म अलि वरपर मोटरसाइकल रोकेर बस्दा पनि मैयाँहरु मेरो पछि लागिनै रहे । त्यतिबेलै साथी आइपुग्नुभयो, हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ ।
बाटोमा साथीबाट नै थाहा भयो, मोटरसाइकल दोबाटोमा रोकेर छेउमै उभिने मानिस नगरबधूको प्रतीक्षामा हुन्छ । त्यो नगरबधूहरुको लागि संकेत हो रे । लौ, काठमाडौँका नगरबधूबाट बचिएछ भन्दै ठट्यौली गर्दै सामान किनेर साथीलाई उहाँको घरमा छोडेर म लागेँ डेरातिर । धेरै दिनसम्म जबजब म त्यो चोकमा आइपुग्थेँ, ती मैयाँहरुको सम्झना आइहाल्दथ्यो ।
केटाकेटीको पढाइ बीचमै भएकाले म मात्र काठमाडौँमा थिएँ । अफिसबाट एउटा मोटरसाइकल पाएँ । दिन कटिरहेका नै थिए ।
एक दिन, म अफिस समयपश्चात् घरतिर लाग्न बाहिर निस्कनै लागेको थिएँ, पछाडिबाट आवाज आयो— सर, सर एकछिन !
पछाडि फर्केर हेरेको मलाइ नै बोलाउँदै एक जना महिला कर्मचारी आइरहेकी रहिछन् । मेरो नजिक आएर मैयाँले भनिन्– “सरलाई मैले धेरैपल्ट बानेश्वरमा देखेँ, उतै बस्नुहुन्छ हो ?”
मैले हो भनेर टाउको हल्लाएँ ।
“हाम्रो बसाइ एकैतिर रहेछ, मलाई पनि लिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ ?”
आफ्नी छोरीजस्ती नानीलाई किन नाइँ भन्नु । मैले ती मैयाँलाई पनि बानेश्वर चोकबाट उठाउने र बेलुका त्यहीँ छोडिदिने गर्न थालेँ । एक महिनाजति त मैया छोरीकै व्यवहारमा देखिइन् पनि ।
सधैँ सँगै आउँदा–जाँदा एकअर्काको बारेमा पनि जानियो । विवाह भएको चार महिनामा डिभोर्स गरेर माइतमा बसेकी रहिछन् मैयाँ ।
एक साँझ फर्किंदै गर्दा बाटोमा मैले सोधेँ– “चार महिनामा नै किन डिभोर्स भयो त ? केटा खराब परेछ कि के भो ?”
मेरो प्रश्नमा उनी रून लागिन्, मेरो पछाडि बसेकै बेलामा । ओहो, कसैको व्यक्तिगत कुरामा मलाई के मतलब ? किन सोधेछु नसोधेको भए हुन्थ्यो, गल्ती पो गरेँ भन्ने महसुस भयो मलाई । मेरै प्रश्नले रोइरहेकी नानीलाई दोबाटोमा छोडेर हिँड्न मनले मानेन । मैले मोटरसाइकललाई बानेश्वरको बेकरी क्याफेतिर मोडेँ । उनको डिभोर्स किन भयो भन्ने जान्नुभन्दा पनि उनलाई मैले किन रूवाएँ भन्ने मेरो मनमा परिरहेको थियो । एक–एक प्लेट मम र चिया खाउन्जेल मैले उनलाई जिन्दगीका आकास–पाताल देखाएर सम्झाएँ ।
“आफू बलियो बन, उमेर गएको छैन । दोस्रो विवाह गर्दा हुन्छ, योग्य मानिस खोजेर ।” उनलाई सामान्य बनाएर हामी आ–आफ्नो बाटो लाग्यौँ ।
भोलिपल्ट मैयाँले बिदामा बस्छु भन्दै फोन गरिन्, म आफ्नै दैनिकीमा । पर्सिपल्ट मैयाँ मुस्कुराउँदै मेरो पछाडि बस्न आइन् । मैले पनि अस्तिको कुरालाई सामान्य रुपमा लिएँ । मैयाँको आजको बसाइ मलाई त्यति सहज लागेन ।
सहयात्री भएको एक महिनापछाडि उनले मेरो कुममा हात राखेर बसिन् । श्रीमतीले मात्र छोएको मेरो शरीरमा ती मैयाँको हातले मलाई झसंग बनायो । सारी लगाएर पछाडि बस्दा श्रीमती पनि त्यसरी नै हात राख्दथिन् । तर, मैयाँले त सारी पनि लगाएकी थिइनन् । कहिले मेरो कुममा हात राख्ने, कहिले शरीर टाँसिएर बस्ने ! मैयाँको बसाइ मलाई असहज महसुस हुँदै गएको थियो ।
एक दिन मैयाँले मेरो घरपरिवारका बारेमा जान्न खोजिन् । मैले सबै बताएर केटाकेटी र आफूमात्र यहाँ छौँ भनेपछि त मैयाँको हाउभाउ नै झन् बढी देखिन थाल्यो । कुमको उनको हात मेरो कम्मरमा आइपुग्यो । आखिर म पनि पुरूष नै त हो, परस्त्रीको शरीरले छोएको रमाइलै लागेको थियो ।
तर एक दिन मैयाँले कुरैकुरामा मसित शारीरिक सम्पर्कको याचना गरिन् । ओहो, छोरीसरहकी मैयाँ । म विवाहित पुरूष । लौ, बरवाद !
कोठा स¥यो भने त मैयाँलाई ल्याउनु–लैजानु पर्दैन भन्ने मनले सोच्यो । मैयाँकै लागि म त्यो ठाउँ नै छोडने विचारमा पुगेँ र लागेँ कोठा खोज्न ।
नक्सालमा एउटा घर पनि भेटियो । दुई कोठा एक भान्सा, हाम्रो लागि उपयुक्त । दुई तलाको त्यो घरमा माथि घरधनी बूढाबूढी, तल हामी । घर सरियो, मोटरसाइकल पछाडि बस्ने मैयाँ पनि हटिन् । नयाँ घरमा बसेको पनि
महिना बित्यो ।
शनिबारको दिन बिहान भाडा दिन भनेर म माथि उक्लिएँ घरधनी महिला मात्र घरमा हुनुहुँदो रहेछ । सायद्, बूढाकी कान्छी श्रीमती हुन् कि के हो, जवान महिला रहिछन् घरभेटी त ।
“श्रीमान तरकारी लिन जानुभएको छ, बस्नू न म चिया बनाउँछु ।”
उनले मेरो जवाफ नै नसुनी अर्को कोठातिर छिरिन् । म असजिलो महसुस गर्दै अगाडिको सोफामा बसेँ । चिया तयार नहुँदै बूढा पनि आइपुगे । झन्डै ७ को दशकमा हुन् कि जस्ता देखिने बूढाकी बूढी ४ को दशकमा पनि पुगेकी थिइनन्, मेरो हेराइमा । बूढासित गफ गर्दै चिया पिएर भाडा बुझाउँदै म तल झरेँ ।
त्यसको भोलिपल्टदेखि त माथि पाकेका खानेकुराहरु हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्न थाल्यो । साँझ–बिहान घरभेटी साहूनी त तल झरेर हामीसित गफ पनि गर्न थालिन् ।
मलाई ज्वरो आयो । बिहान–बेलुकै के–के बहानामा तल झर्ने घरभेटी साहूनीलाई थाहा भइहाल्यो । म बिरामी परेकाले छोराछोरी को घर बस्ने भन्ने छलफल गर्न थाले । पढाइ नछोड, म दिनभर घरमा भैहाल्दछु । म हेरिदिन्छु नि सरलाई भनेर केटाकेटीलाई घर बस्न दिइनन् । मेरा लागि कुरिलोको सूप, मुङको दालको रोटी र अरु पनि के–के खानेकुरा आइनै रहन्थ्यो दिनभर ।
तल–माथि गर्दागर्दै मैले थाहा पाएँ, ती मैयाँ त बूढाकी कान्छी श्रीमती नै रहिछन् । दुइ छोराकी आमा भैसकेकी दिदि अर्कैसित भागेपछि कान्छी साली बिहे गरेका रहेछन्, बुढाले । छोराहरु विदेशमा, बूढा र कान्छी मात्र घरमा । मलाई टाइफाइड भएको रहेछ, घर बसाइ लामै भयो । दाइ–बैनीको साइनोमा हामी बाँधियौँ यो बीचमा ।
तर, मेरी नयाँ बैनी मैयाँको हाउभाउ पनि बेग्लै हुन थाल्यो । उनले पनि एक दिन छोराछोरी घर गएको मौका छोपेर मेरो कोठामा आएर अंकमाल गर्दै भनिन्, ‘दाइ मस्ती गरौँ न ।’ ममाथि बज्रिएको त्यो अप्रत्याशित घटनाले मेरो पूरै शरीर काम्यो ।
‘छोराछोरी मात्र लिएर हजुर बस्ने भनेकोले त मैले हजुरलाई सस्तोमा घर दिएको नि । हजुर काठमाडौँ बसुन्जेल यही बस्नू, हामी मस्ती गरौँ । आखिर, हजुर पनि भोको र म पनि भोको, हुन्न र ?’
ओहो, मैले मुसुक्क मुस्कुराउँदै गरेर बाटोसम्म आएर बिदा गरेकी आफ्नै कालीको अनुहार सम्झिएँ । उसका लागि सबै म, मेरा लागि ऊ किन हुन सक्दिनँ र ? म मैयाँको अँगालोबाट बाहिरिएँ । केहीबेर मैले उसलाई सम्झाएँ ।
अब म बूढा माथि हुने बेलामा मात्र कोठामा बस्न थालेँ । बेला न कुबेला कहाँ–कहा“ बरालिनु । केटाकेटीको छुट्टी पनि सकिएको थिएन । आमाले पकाएको खान छोडेर उनीहरु आफैँ पकाउन चाँडै आउने कुरै थिएन । मलाई भने यहाँ समस्या परिरहेको थियो ।
छोराछोरी नआउन्जेल म धेरै नै बरालिएर बसेँ । छोराछोरी आएपछि त मलाई कुनै असजिलो महसुस गर्नु परेन । घरभेटीलाई भाडा दिन केटाकेटीलाई नै पठाउन
थालेको थिएँ ।
अफिसमा कर्मचारी हेरफेर भए । मेरो शाखामा महिला हाकिम आउनुभयो । काम गराइमा केहीदिन अलमल भए पनि चाँडै नै अफिसको काम सुचारू रुपले चल्न थाल्यो । मेरो र हाकिमको कोठा आमने–सामने नै थियो । प्रायःजसो खाजा हामी सँगै खान्थ्यौँ । उहाँ मेरो हाकिम भए पनि हामीबीचमा मित्रताको भावना बलियो हुँदै गइरहेको थियो । अफिस समयमा धेरैजसो सँगै हुने हुनाले होला, हामीमा अलिअलि घरायसी कुरा पनि हुन थाल्यो ।
उनी त एक छोराकी आमा भैसकेकी कुमारी आमा पो रहिछन् । श्रीमान् तेस्रो लिंगी परेछन् । आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा लुकाउने र अभिभावकको चाहनामा विवाह गरेको परिणाम थियो यो ।
“छोरा जन्मिसकेको छ, तर श्रीमान् नपुंसक भन्दा मेरो कुरा कसले पत्याउँछ र ? म इज्जत भन्दै सात वर्षदेखि त्यही श्रीमान्सित छु । शारीरिक सन्तुष्टिबाहेक अरु कुरामा मेरो श्रीमान्ले जत्ति मेरो लागि गरेको छ, त्यत्ति कुनै श्रीमतीले पनि श्रीमान्बाट पाएका छैनन् होला जस्तो मलाई लाग्दछ”, उनी मसँग भन्दै थिइन् ।
ती महिला हाकिमको कुराले मलाई उनी कुशल कर्मचारीका साथसाथै त्यागकी मूर्ति भन्ने लाग्यो ।
मध्यम वर्गीय परिवारको प्रमुख म व्यावहारिक कुराहरु मिलाउनु मेरै जिम्मेवारीमा पर्दछ । छोरीको विवाह गरियो, त्यो बेला मैले आर्थिक रिन पनि पाएको थिए, उनीबाट । छोरीको विवाहमा निम्ता गरेकाले उनी पनि मसँगै मेरो घर पुगेकी थिइन् । परिवारसँग पनि घुलमिल भैसकेकीले म निःसंकोच परिवारिक कुरा पनि उनीसित गर्न थालिसकेको थिएँ ।
मेरो जीवनमा अर्को अप्रत्याशित घटना घट्यो । शनिबार मेरो मोबाइलमा फोन आयो, उनै हाकिमको । उनी मेरो कोठामा आउने भन्ने कुरा थियो । उनी आउने समाचारलाई मैले सामान्य रुपमा लिएँ । उनी रातो गुलाफको एउटा ठूलो बुके लिएर मेरो कोठामा आइपुगिन् । उनको हातमा बुके देख्दा कुनै पार्टीमा उनलाई जानु रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो, तर उनले लगाएको कपडा पार्टीमा जानेजस्तो थिएन । मैले गुलाफको बुकेतिर देखाउँदै इशाराले सोधेँ–
‘यो केका लागि र किन ?’
उनले केही बोलिनन् । ब्यागबाट एउटा खाम निकालेर मेरो हातमा दिँदै भनिन्–
‘यो पढ्नू अनि प्रश्न गर्नुहोला ।’
म आज्ञाकारी बन्दै खाम खोलेर पढ्न थालेँ । पत्रको आशय थियो, दुवै परिवारलाई कुनै असर नपार्ने गरी शारीरिक सम्पर्क राख्ने !!!!
लौ मा¥यो, रातो गुलाफको बुके त प्रेम प्रस्तावको प्रतीक पो रहेछ ! मैले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेँ भने आउन लागेको भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाफ उनलाई दिनू रे ।
उफ्, म केही बोल्न सकिनँ । टेकेको जमिन धसियो । चिटचिट पसिना आयो । परिवर्तित मेरो अवस्था देखेर होला, उनी पछि कुरा गरौँला भन्दै बाहिरिइन् ।
अब के गर्ने ! नाइँ भनूँ हाकिम, ल भन्ने त कुरै आउँदैन । छटपटी भयो । कसलाई भन्नु, के गर्नु ? आखिरमा आधी अंग अर्धांगिनीलाई नै भन्ने विचार गरेँ र फोन गरेँ, तुरून्त काठमाडौँ आऊ भन्दै ।
कारण अरु नै बहाना बनाएर बोलाएकाले उनी पनि भोलिपल्टै आइपुगिन्, मेरो अगाडि । गुलाफको बुके र पत्र नै उनका अगाडि
राखिदिएँ । महिला त हो, पत्र पढिसकेपछि सराप्दै रून थालिन् । आक्रोश आँशुबाट बगाई सकेपछि अब के गर्ने भनेर सल्लाह भयो, हामी बूढाबूढीमा । अगाडि परेको समस्याका धेरै समाधानहरु आए–गए र अन्त्यमा निर्णय भयो— अफिसको मुख्य हाकिमलाई भेटेर सबै कुरा अवगत गराउने ।
भोलिपल्ट बिहानै हामी दुवैजना पुग्यौँ हाकिमको निवासस्थानमा । पत्र देखाएर रूँदै मेरी श्रीमतीले मेरा लागि सरूवा गरिदिन अनुनय–विनय गरिन् ।
हाकिमले तुरून्तै सरूवा त गर्न सक्दिनँ, तर शाखा सारिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर हामीलाई बिदा गर्नुभयो । डेरामा फर्केर खाना खाएर म अफिस आएँ । अफिसका कामका कुराबाहेक मेरो ती महिला हाकिमसित केही कुरा भएन ।
अब डर छ, भ्यालेन्टाइन डेको के गर्ने ?
आज मुख्य हाकिमले मेरो शाखा परिवर्तन गरिदिएको जानकारी दिनुका साथै भ्यालेन्टाइन डेको बेला पारेर मलाई जिल्लाबाहिर फिल्ड पठाइदिने कुरा पनि भन्नुभयो । मन अहिले खुशी भएको छ । उफ्, यो भ्यालेन्टाइन डे…..!